HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Ourdou Pangasinan Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Boloky manga sy mavo. Halavany: 85 santimetatra
METY hahita andiam-borona mareva-doko mivoaka avy ao anaty ala ianao, raha mankany Amerika Afovoany sy Atsimo. Talanjona ireo Eoropeanina mpikaroka tany vaovao tamin’izy ireo tonga tany, taloha kelin’ny taona 1500. Karazana boloky lava rambo no hitan’izy ireo. Tsy ela dia natao teo amin’ny sarintany ny sarin’io vorona tsara tarehy io, mba ho famantarana an’ilay tany vaovao toy ny paradisa.
Hafakely io karazana boloky io satria samy mareva-doko na ny lahy na ny vavy. Marani-tsaina koa izy io sady tsy misara-mianakavy. Maranitra ny feony ary somary garagara. Mety hahatratra 30 eo ho eo ny boloky ao amin’ny andiany iray, ary miara-mandao ny akaniny vao maraina be izy ireo mba hitady voan-javatra, na voankazo, na sakafo hafa. Tazoniny amin’ny hohony ny sakafony ary tsaingohiny amin’ilay vavany mifaingoka, toy ny fanaon’ny boloky rehetra ihany. Na ny voan-javatra mafy be aza voavakiny! Rehefa voky izy ireo, dia mirohotra mankeny amin’ny harambato na moron-drano mba hitsaingoka tanimanga. Angamba izany manala ny poizina amin’ny sakafony sady mitondra zavatra simika ilain’ny vatany.
“Tsara sy tamin’ny fotoanany avy no nanaovan’Andriamanitra ny zava-drehetra.”—Mpitoriteny 3:11
Iray ihany ny vadiny mandra-pahafatiny, ary miara-mitaiza ny zanany ny boloky lahy sy vavy. Manao akany ao anaty votry izy ireo, na any amin’izay toerana misy lavaka azony isitrihana, ohatra hoe ao anaty vatan-kazo, eny amoron-drano, na eny amin’ny harambato. Mety hahita boloky lahy sy vavy mikarakara ny volony ianao eny amin’ireny toerana ireny ary mifanampy izy ireo. Efa lehibe ny boloky rehefa feno enim-bolana, saingy telo taona eo ho eo izy vao misaraka amin’ny ray aman-dreniny. Mahatratra 30 na 40 taona io karazana boloky io vao maty, rehefa any an’ala. Nisy kosa velona 60 taona mahery rehefa nompiana. Misy karazany 18 eo ho eo io boloky io, ary aseho eto ny sasany amin’izany.
Boloky maitso elatra. Antsoina koa hoe boloky mena sy maitso. Halavany: Mahatratra 95 santimetatra
Boloky mena midorehitra. Halavany: 85 santimetatra
Boloky volomparasy tanora. Halavany: Mety hahatratra iray metatra. Io no karazana boloky lehibe indrindra, ary mety hahatratra iray kilao sy telonjato mahery ny lanjany